“Operation (Duula) Gammachuu Abdii” jedhamuun WBOn Injifannoo Galmeessise | Oromo Freedom News and Views
← Breket Simon hinting that he will resign from his ministerial and party positions
Poem: Gone to never go back until the freedom day →
“Operation (Duula) Gammachuu Abdii” jedhamuun WBOn Injifannoo Galmeessise
(Madda Oduu ABO/MOA/Amajjii 14,2013) Bilisummaa Oromoo(WBO) Baha Oromiyaa, Hararge Dhihaa keessa sosso’u Amajjii 2, 2013 Ona Bookee bakka Burqaa Diimtuu jedhamutti humna diinaa sochii irra ture haxxeen haleelee loltoota 8 irraa ajjeesuun 5 madeesse. Kana malees humni addaa WBO humna diinaa karaa guddaa Finfinnee geessu irratti paatrooliif bobba’e Bordoddee fi Awaash giddhuutti haxxeen rukutee diina irraa 6 battalumatti ajjeefame. Makiinaan ittiin sosso’aa turanis guutummaatti barbadeeffamte. Tarkaanfii Amajjii 5, 2013 WBOn fudhate kanaan humni diinaa haleelame humna addaa moggaafamee kan hojii sakkattaaf leenjifame tahuun beekameera.
Gama biraan WBOn tarkaanfii fudhatu itti fufuun Amajjii 8, 2013 Hararge Dhihaa Ona Mi’essoo magaalaa Mi’eessoo bakka Buttujjii jedhamee beekamutti qondaalota diinaa bashannanaa turan haleelee diina irraa 7 ajjeesuun 5 madeessee jira. Diinni tarkaanfii WBOn fudhate kana ijaa bahuuf ummata nagaa naannoo sana jiraatu 100 olitti herregamu hidhee dararaa akka jiru beekameera. Tarkaanfiileen Baha Oromoyaa irraan fudhataman kanneenis Operation(Duula)Gammachuu Abdii jedhamuun kan beekamu tahuu ajajni Godinaa Bahaa hubachiiseera.